Gadhka Hipster oo ah mid ka mid ah isbeddellada moodada hadda socda | Ragga Stylish
Ragga gadhka timo badanaa waxay u sameeyaan si fudud iska ilaali inaad xiirto.
Xirashada timaha wajiga waxay kuxirantahay qaabka loo qaatay, waa hawl dalban karta shaqo iyo dadaal ka badan xiirista maalin kasta. Hadana haddii uu jiro nooc gadh ah oo u baahan in si taxaddar leh loo eego, waa Hipster-ka.
1 Asalka iyo astaamaha garka Hipster
2 Sida loo qeexo qaab
Asalka iyo astaamaha garka Hipster
"Khabiirrada" ku jira qaabka ragga isma waafaqsana asalka gadhka misigta. Hadday wax jiraan, waxaad mooddaa inay jiraan laba qaab:
Aragtida Koowaad: Meelaha miyiga ah ee Mareykanka, oo ay adeegsadeen dhir jarista iyo milkiileyaasha dhulka.
Aragtida labaad: Fiktooriya London, oo caan ku ah mudanayaal Ingiriis ah oo waxbartay.
El qaabka wadanku wuu ka adag yahay iyo xitaa iskaa wax u qabso. Faahfaahinta qaar waxaa lagu xisaabtamayaa fiiqda, sida soo koobidooda ama xitaa dheereynta iyo xoqidda, sida ku xusan dhaqankii hore ee lo'leyda iyo beeraleydii qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad ee qeyb ka mid ah Waqooyiga Ameerika.
Qaabka magaalooyinku waa ka qurux badan yahay. Waa in si joogto ah loo qeexaa iyadoo la isticmaalayo maqas. Waxay kordhisaa mugga ka soo baxa bararka dhinac ilaa ay ka sii dheereyso garka. Xitaa qeybta sare ee wajiga, waxaa jira kuwa ku labista jab yar oo u dhexeeya timaha iyo timaha wajiga, si ay uga soocaan midka kale.
Sida loo qeexo qaab
Waxa ugu horreeya waa in loo daayaa gadhka. Dhammaan kiisaska isku mid ma aha, laakiin waxay qaadataa qiyaastii lix asbuuc ilaa ay ka bilaabmi karto qaabeynta. Waxa lagula taliyay xilligan waa in si tartiib tartiib ah loo siiyo qaabka la doonayo.
Gip Hipster ayaa dalbanaya jadwalka daryeelka taasi waa in la fuliyaa. Isticmaalka shaambooyada iyo alaabada kale ee gaarka ah ayaa sidoo kale la soo jeediyay, si loo ilaaliyo dhalaalka loona qoyo maqaarka wajiga.
Maaha qaab gadh lagu talin karo ragga timaha wajiga si weyn ama si siman uma koraan.
Ilaha sawirka: INmendoza / Nalalka Korontada
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Isbeddellada moodada: Gip Hipster
Marka iibku bilaabmo